मानव आचरणले मेरो हृदयलाई कहिल्यै छोएको छैन, नत मेरो लागि यो कहिल्यै बहुमूल्य रूपमा नै देखा परेको छ। मानिसको नजरमा, म जहिल्यै पनि त्यसको विरुद्धमा कडा हुन्छु, र म सधैँ त्यसको विरुद्धमा अधिकारको प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। मानिसका सबै कार्यहरूमा, मेरो खातिर गरिने कुरा बिरलै हुन्छ, मेरो नजर अगाडि दह्रिलो गरी खडा हुने कुरा बिरलै हुन्छ। अन्तिममा, मानिसले कुनै कानेखुसी समेत नगरिकन मेरो अगाडि सबै कुरा थुपार्छन्; त्यसपछि मात्रै हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नै असफलताद्वारा मलाई चिन्‍ने तुल्याउँदै म मेरा कार्यहरूलाई प्रकट गर्छु। मानव स्वभाव अपरिवर्तित रहन्छ। तिनीहरूका हृदयमा जे छ, त्यो मेरो इच्‍छा अनुसार छैन—मलाई चाहिने कुरा यो होइन। मैले सबैभन्दा बढी घृणा गर्ने कुरा भनेको मानिसको कठोरता र अपराध दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति हो, तर मलाई जान्‍न बारम्‍बार असफल गराउन, मलाई सधैँ टाढा राख्‍न, र मेरो इच्‍छा अनुसार कहिल्यै काम नगर्ने तर मेरो पिठ्यूँ पछाडि मेरो विरोध गर्ने तुल्याउन मानवजातिलाई बाध्य बनाउने शक्ति के हो? के तिनीहरूको निष्ठा यही हो? के मप्रतिको तिनीहरूको प्रेम यही हो? किन तिनीहरू पश्‍चात्ताप गरेर नयाँ गरी जन्‍मन सक्दैनन्? किन मानिसहरू हिलो नभएको ठाउँमा बस्‍नुको सट्टा दलदले हिलोमा नै सदासर्वदा बसिरहन इच्‍छुक हुन्छन्? के मैले तिनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेकोले हो? के मैले तिनीहरूलाई गलत दिशातर्फ इसारा गरेकोले हो? के मैले तिनीहरूलाई नरकतिर डोर्‍याएकोले हो? हरेक व्यक्ति नै “नरक” मा जिउन इच्‍छुक हुन्छन्। जब ज्योति आउँछ, तिनीहरूको आँखा तुरुन्तै दृष्टिविहीन हुन्छ, किनभने तिनीहरूमा भएको हरेक कुरा नरकबाट आउँछ। तैपनि मानिसहरू यसको बारेमा अनभिज्ञ छन्, र यी “नरकीय आशिषहरू” मा नै तिनीहरू आनन्द लिन्छन्। तिनीहरूलाई “तिनीहरूको अस्तित्वको मूलविना” नै छोडेर, मैले ती सम्पत्तिहरूलाई खोसेर लिनेछु भन्‍ने डरले तिनीहरूले तिनलाई सम्पत्तिको रूपमा आफ्‍ना छातीमा मुठ्ठी कसेर समेत लुकाएर राख्छन्। मानिसहरूले मेरो डर मान्छन्, त्यही कारणले गर्दा, जब म पृथ्वीमा आउँछु, मेरो नजिक आउने कार्यलाई घृणा गर्दै तिनीहरू मबाट टाढा बस्छन्, किनभने “आफैमाथि समस्याहरू ल्याउन” तिनीहरू अनिच्‍छुक छन्, तर आफ्‍नो परिवारभित्र सद्‌भाव कायम गर्ने कामना गर्छन् ताकि तिनीहरू “पृथ्वीको खुसी” मा रमाउन सकून्। तर म मानवजातिलाई तिनीहरूले चाहे अनुसार गर्न दिन सक्दिन, किनभने मानिसको परिवारलाई नष्ट गर्नकै लागि म यहाँ आएको छु। म आइपुगेकै क्षणबाट तिनीहरूका घरहरूबाट शान्ति गइसकेको हुन्छ। सारा राष्ट्रहरूलाई धूलो-पीठो हुने गरी चकनाचूर गर्ने, मानिसको परिवारको बारेमा केही पनि नभन्‍ने अभिप्राय मेरो छ। मेरो पकडबाट को उम्कन सक्छ र? के आशिषहरू प्राप्त गर्ने सबै आफ्‍ना अनिच्छाको सद्गुणद्वारा उम्कने हुन सक्छ? के सजाय भोग्‍नेहरूले आफ्‍नो डरको सद्गुणद्वारा मेरो सहानुभूति प्राप्त गर्ने कहिल्यै हुन सक्छ? मेरा सबै वचनहरूमा, मानिसहरूले मेरो इच्‍छा र मेरा कार्यहरूलाई देखेका छन्, तर आफ्‍नै विचारहरूको जालबाट को स्वतन्त्र हुन सक्छ? मेरा वचनहरूबाट वा बाहिरबाट उम्कने बाटो कसले कहिल्यै पत्ता लगाउन सक्छ?
जब मेरो प्रशंसामा स्वर्गदूतहरूले सङ्गीत बजाउँछन्, यसले ममा मानिसप्रतिको सहानुभूतिलाई जगाएरै छाड्छ। मेरो हृदय तुरुन्तै उदासीनताले भरिन्छ, र यो पीडादायी भावनाबाट आफैलाई मुक्त गर्नु असम्‍भव छ। मानिसबाट अलग गरिनु र फेरि मिल्‍नुको आनन्द र शोकमा, हामी भावनाको आदनप्रदान गर्न असक्षम छौं। स्वर्गमा माथि र पृथ्वीमा मुनि अलग गरिएको कारण, म र मानिस बिरलै भेट्छौं। अतीतका यादहरूबाट को उम्कन सक्छ? अतीतका मीठा यादहरूलाई कसले रोक्‍न सक्छ र? विगतका भावनाहरू जारी रहोस् भन्‍ने आशा कसले गर्दैन र? मेरो आगमनको यादमा कसले पीडा सहँदैन र? मानिससँगको मेरो मिलापको लागि कसले तृष्णा गर्दैन र? मेरो हृदय बेचैन छ, र मानिसको आत्मा अत्यन्तै चिन्तित छ। आत्मामा उस्तै भए पनि, हामी त्यति एकसाथ हुन सक्दैनौं, र हामी त्यति एक-अर्कालाई भेट्न सक्दैनौं। त्यसैले सारा मानवजातिको जीवन शोकले भरिएको छ र यसमा जोशको कमी छ, किनभने मानिसले सधैँ मेरो तृष्णा गरेको छ। यो यस्तो छ मानौं मानवजाति स्वर्गबाट फ्याँकिएका वस्तुहरू हुन्; तिनीहरू भुइँबाट नजर उठाएर मलाई हेर्दै पृथ्वीबाट मेरो नाम पुकार्छन्—तर तिनीहरू भोको ब्‍वाँसोको मुखबाट कसरी उम्कन सक्छन् र? यसका खतराहरू र यसका परीक्षाहरूबाट तिनीहरूले आफैलाई कसरी मुक्त गर्न सक्छन् र? मेरो योजनाको प्रबन्धको पालनको कारण कसरी मानवजातिले आफैलाई बलिदान गर्न सक्दैन? जब तिनीहरूले उच्‍च सोरमा बिन्ती गर्छन्, म तिनीहरूबाट मेरो अनुहार लुकाउँछु, म उप्रान्त तिनीहरूलाई हेर्नै सक्दिन; तर तिनीहरूको आँसु सहितको रुवाइलाई नसुनी म कसरी बस्‍न सक्छु र? म मानव संसारका अन्यायहरूलाई सच्याउनेछु। मेरा मानिसहरूलाई फेरि हानी गर्नबाट शैतानलाई रोक्दै, फेरि आफू खुसी गर्नबाट शत्रुहरूलाई रोक्दै, म संसारभरि मेरै हातद्वारा मेरो काम गर्नेछु। मेरा सबै शत्रुहरूलाई भुइँमा लडेर मेरो अगाडि आफ्‍ना अपराधहरू स्वीकार गर्ने तुल्याउँदै म पृथ्वीमा राजा बन्‍नेछु र मेरो सिंहासनलाई त्यहाँ सार्नेछु। उदासीनता, साथै रिसको बेलामा, कसैलाई पनि बाँकी नराखी अनि मेरा शत्रुहरूको हृदयमा आतङ्क पैदा गर्दै म सारा ब्रह्माण्डलाई कुल्चि-मिल्ची गर्नेछु। म सारा पृथ्वीलाई अवशेषमा परिवर्तन गर्नेछु, र मेरा शत्रुहरूलाई त्यही अवशेषमा खसाल्‍नेछु, ताकि उप्रान्त तिनीहरूले मानवजातिलाई भ्रष्ट बनाऊन्। मेरो योजना पहिले नै निश्‍चित भइसकेको छ, र कसैले पनि यसलाई परिवर्तन गर्दैन, चाहे तिनीहरू जोसुकै होऊन्। म ब्रह्माण्डमाथिको प्रतापी वैभवमा डुलिहिँड्ने क्रममा, सारा मानवजातिलाई नयाँ बनाइनेछ, र सबैलाई पुनर्जीवित पारिनेछ। मानिसले उप्रान्त कहिल्यै पनि बिलौना गर्नेछैन, सहयोगको लागि मलाई पुकार्नेछैन। त्यसपछि मेरो हृदय आनन्दित हुनेछ, र मानिसहरू हर्सोल्‍लासमा मकहाँ फर्कनेछन्। टुप्‍पादेखि फेदसम्‍म, सारा ब्रह्माण्ड हर्षोल्लासमा उर्लनेछ …
संसारका राष्ट्रहरूका बीचमा आज, म आफूले पूरा गर्ने भनी तय गरेको काम गरिरहेको छु। मेरा योजनाभित्रका सारा काम गर्दै म मानवजातिको बीचमा हिँड्डुल गरिरहेको छु, र सारा मानवजातिले मेरो इच्‍छा अनुसार फुटकर राष्ट्रहरूलाई तोडिरहेका छन्। पृथ्वीका मानिसहरूले आफ्‍नो गन्तव्यमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, किनभने त्यो दिन वास्तवमा नै नजिक आइरहेको छ र स्वर्गदूतहरूले आफ्‍ना तुरहीहरूलाई फुकिरहेका छन्। अब उप्रान्त ढिलाइ हुनेछैन, र सारा सृष्टि नै त्यस बेला हर्षोल्लासमा नाच्‍न थाल्‍नेछ। कसले आफ्‍नो इच्‍छा अनुसार मेरो दिनलाई लम्ब्याउन सक्छ? के पृथ्वीको प्राणीले? वा आकाशका ताराहरूले? वा स्वर्गदूतहरूले? जब इस्राएलका मानिसहरूको मुक्तिको पहल गर्नको लागि म वाणी बोल्छु, तब सारा मानवजातिको सामने मेरो दिन आउँछ। इस्राएल फर्की आउने घटनाप्रति हरेक मानिस डराउँछ। जब इस्राएल फर्केर आउँछ, त्यो मेरो महिमाको दिन हुनेछ, र त्यो यस्तो दिन पनि हुनेछ, जुन दिन सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ र नवीकरण हुन्छ। धर्मी न्याय सारा ब्रह्माण्डमा आउन लागेको बेला, सबै मानिसहरू डरपोक बन्छन् र भयभीत हुन्छन्, किनभने मानव संसारमा धार्मिकता त नसुनिएको कुरा हो। जब धर्मी सूर्य देखा पर्छ, पूर्व प्रकाशित हुनेछ, र हरेक व्यक्तिलाई ज्योति दिँदै यसले सारा ब्रम्‍हाण्डलाई प्रकाशित गर्नेछ। यदि मानिसले साँच्‍चै नै मेरो धार्मिकतालाई अघि बढाउन सक्छ भने, डराउनु पर्ने कारण के हुनेछ र? मेरा सबै मानिसहरू मेरो दिनको आगमनको लागि प्रतिक्षारत छन्, तिनीहरू सबै मेरो दिनको आगमनको तृष्‍णा गर्छन्। सारा मानवजातिमा दण्ड ल्याउन र धार्मिकताको सूर्यको रूपमा रहेको मेरो भूमिकामा मानवजातिको गन्तव्यलाई मिलाउनको लागि तिनीहरू मेरो प्रतीक्षा गर्छन्। सारा ब्रह्माण्डभन्दा माथि मेरो राज्य आकारमा आइरहेको छ, र मेरो सिंहासनले करोडौँ मानिसहरूको हृदयमा शासन गर्छ। स्वर्गदूतहरूको सहयोगमा, मेरो महान् उपलब्धिलाई चाँडै नै पूरा गरिनेछ। तिनीहरूबाट फेरि कहिल्यै अलग नहुने गरी, तिनीहरूसँग मिलाप गर्ने दिनको लागि मेरा सन्तान र मेरा मानिसहरू मेरो आगमनको उत्कट इच्‍छाको साथ प्रतीक्षा गर्छन्। म तिनीहरूसँग भएको कारण मेरा राज्यका कैयौं निवासीहरू आनन्दको हर्षोल्‍लास मनाउन एक-अर्कासँग किन नदौडी बस्‍न सक्छन् र? के यो त्यस्तो मिलाप हो जसको लागि कुनै मूल्य चुकाउनु आवश्यक छैन? म सबै मानिसहरूको नजरमा सम्‍मानित छु, म सबैका वचनहरूमा घोषित छु। तैपनि, जब म फर्कनेछु, तब म शत्रुका सबै शक्तिहरूलाई विजय गर्नेछु। समय आइपुगेको छ! म मेरो कार्यलाई अघि बढाउनेछु, म मानिसहरूका बीचमा राजाको रूपमा शासन गर्नेछु! म फर्कन लागेको अवस्थामा छु! र म बिदा हुन लागेको छु! सबैले आशा गरेको यही नै हो, तिनीहरूले कामना गर्ने यही नै हो। सारा मानवजातिलाई म मेरो दिनको आगमनलाई अवलोकन गराउनेछु, र तिनीहरूले मेरो दिनको आगमनलाई आनन्दको साथ स्वागत गर्नेछन्।
अप्रिल २, १९९२